Samy nahatsikaritra ny rehetra fa tsy nandray ny filohan’ny Repoblika ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana na dia efa vonona ny amin’izany aza ity farany niaraka tamin’ny samboady. Isan-taona anefa dia tahaka izany foana amin’ny maha mpampiantrano ny lanonana ara-panjakana ny CUA. Mba nisy ihany ny olana teo amin’ny CUA sy ny fanjakana HVM tamin’ny fotoan’androny fa nifanaja sy tsy nifanalabaraka ny filoha sy ny ben’ny tanàna. Fetim-pirenena mantsy io ka tsy hijerena loko politika, nabaribarin-dRajoelina kosa izany omaly. Efa ny maraina ny Tale ao amin’ny CUA miadidy ny fotodrafitrasa vao nampahafantarin’ny ao amin’ny Fiadidian’ny Repoblika fa miova ny fandaharam-potoana. Omaly maraina ihany koa vao nahalala ny ao amin’ny CUA fa tsy ery ambony ny fitoeran’ny filoha fa ery ambany. Tao anatin’ny 59 taona izay vao nisy filoham-pirenena nibaiko mivantana sy ampahibemaso ny foloalindahy. Fanovana mitondra amin’ny fampandrosoana sy hanasoa ny vahoaka tokoa ve ? Sa fanovana entina hanaovana « culte de personnalité » an-dRajoelina ? (sary eran’ny tanàna amin’ny sainam-pirenena, lokon’ny parachute natao volomboasary…). Tena noporofoin-dRajoelina ary fa tsy vonona hiara-kiasa amin’ny ben’ny tanàna izy. Mizotra amin’ny fanjakana tsy refesi-mandidy na «régime totalitaire» isika. Tsy misy toerana ho an’ny demokrasia intsony eto Madagasikara.